Muuse iyo Kaahin oo xajka aaday Caarre iyo Falaalug oo hub urursi ku jira | Xaysimo
Home War Muuse iyo Kaahin oo xajka aaday Caarre iyo Falaalug oo hub urursi...
Muuse iyo Kaahin oo xajka aaday Caarre iyo Falaalug oo hub urursi ku jira
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Wasiirka Arimaha Gudaha Maxamed Kaahin Cabdi ayaa maanta u ambaxay gudashada Xajka kadib markii ay mudo labo sano ku sii socota ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka Goboladda Bariga ka jira.
Afhayeenka madaxtooyadda Somaliland ayaa xaqiijiyey bixistooda, isagoo shacab warweyn uga dhigay in diyaarad khaas ahi qaaday.
Dhanka kale waxaa weli taagan oo aan xal loo helin colaaddii Ceel-Afweyn iyo arintii Jamhadda korneyl Caarre, halka Degaanadda SSC ay ku soo xoogaysanayaan Jamhadda Xoreynta Khaatumo oo uu hogaamiyo Korneyl Falaalug, kuwaas oo habeenaddii ugu dambeey weeraro ka fuliyey gudaha Magaalada Sool, waxayna warar isa soo tayaraa ay sheegayaan in xidhiidhka labada Jamhadood uu sii xoogaysanayo, islamarkaana hawlgaladoodu ay yihiin wuxuu isku xiriirsan.
Shacabka Somaliland ma filayn in Madaxweyne Muuse iyo Maxamed Kaahin ay iyagoo aan wax guul ah ka gaarin arimaha Goboladda Barri iyo Caarre ay xajka aadayaan, oo ay hambalyo uga dhigaan diyaarad Khaas ah baa naloo soo diray.
DAAWO CALAAMADA DIYAARADA MADAXWEYNAHA QAADAY IYO SHIRKADDA LEH.